I-Rose of Tralee B&B (kuhlanganise nebhulakufesi eliphekiwe) - I-Airbnb
I-Rose of Tralee B&B (kuhlanganise nebhulakufesi eliphekiwe)
Portarlington, Victoria, i-Australia
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Helen
Isici esinelanga esinokungena egcekeni langasese endaweni ethandekayo engadini. Igumbi lokugezela elibanzi negumbi lokulala, okuhlanganisa ingubo yokugqoka enefriji, umenzi wekhofi, ujeke kagesi kanye ne-microwave, ilungele labo abalungela ukuthamela imishado neminye imicimbi ezindaweni zokudayisa iwayini eziseduze.
Izinsiza zokudla ekamelweni nasegcekeni. I-TV enkulu yesikrini esiyisicaba. Abanikazi abanobungane. Ubumfihlo buhlonishwa. Uhambo olufushane oluya olwandle, idrayivu emfushane yokuya ezitolo, izindawo zokudlela, i-bowling kanye neklabhu yegalofu.
Ayikabuyekezwa njengoba le BnB isanda kuvulwa. Abanikazi bayakujabulela ukunikeza isevisi enhle kakhulu. Inhlonipho nobumfihlo kuyaqinisekiswa.
Ilokishi elingasogwini elinokuthula kodwa elidumile eliseNhlonhlweni yaseBellarine, 28km ukusuka edolobheni laseGeelong. Indawo yeholide edumile enamabhishi okubhukuda avikelekile kanye nogu lwangaphambili olukhangayo olubonisa indawo yokudoba ende. Izindawo zososo nepikiniki, amapaki nezindawo zokungcebeleka, amakilabhu e-bowling negalofu. Isikebhe sabahamba ngezinyawo sihamba phakathi kwe-Docklands ne-Portarlington nsuku zonke. Eduze kwamawayini amaningi. Kukhona ibhasi lokuvakasha elitholakalayo kuma-wineries asuka ku-pier. Kukhona amathilomu nezindawo zokudlela eziningi eduze komgwaqo omkhulu. Idume ngoMkhosi weMussel waminyaka yonke kanye noMkhosi weCeltic. Ibanga elifushane ukuya esikebheni sezimoto saseQueenscliff/Sorrento.
Ukubuka okumangalisayo kwetheku kanye nezintaba ze-You Yang. Ukudoba okuhle kakhulu kusuka ku-breakwater/pier ende.
Hlonipha futhi uqinisekise ubumfihlo kodwa kuyatholakala uma kudingeka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Portarlington namaphethelo